Wasiir Yariisow:-“30% Canshuurtii saxda aheyd Garoonka Muqdisho waa la lunsaday” – Puntland Post
Wasiir Yariisow:-“30% Canshuurtii saxda aheyd Garoonka Muqdisho waa la lunsaday”
Wasiirka Warfaafinta, Wasiiru Dowlaha Maaliyada iyo Wasiir-ku-xigeenka ayaa booqday garoonka diyaaradaha ee Aden Adde ee Muqdisho si ay u dhiirigeliyaan shaqaalaha oo muddo labo cisho ah oo Maamulka cusub ee Furdada garoonka diyaaradaha Muqdisho oo labo cisho canshuurta jaadka ku kordhiyey $34,000 dollar.
Waxaana muuqata in 30% canshuurtii saxda aheyd in la lunsaday oo aan la ogeyn meel ay ku baxday. Lacagtaas aan sida sharciga ah loo xareyn ayaa looga faa’iideyn karay in mushaar $100 lagu siiyo in ka badan 5000 askar ah.”
Mas’uuliyiinta booqatay xafiiska Furdada ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa ammaanay maamulka cusub ee Furdada oo la dagaalay musuqmaasuqa isla markaasna badbaadiyey in ka badan $34,000 muddo labo cisho oo ay maamulka la wareegeen.
Waxeyna ku dhiirigeliyeen inay dadaalkooda sii wadaan, dowladdana ay diyaar u tahay inay abaal-mariso shaqaalaha iyo maamulka la dagaala musuqmaasuqa si dalka looga joojiyo musuqmaasuqa jira.
Faafintii Puntland Post